Guddiga doorashada Hirshabeelle oo gudoomiye iyo ku xigeen doortay. | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Guddiga doorashada Hirshabeelle oo gudoomiye iyo ku xigeen doortay.
Guddiga doorashada Hirshabeelle oo gudoomiye iyo ku xigeen doortay.
Guddiga doorashadda ee dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa maanta doortay Guddoomiye iyo Kuxigeen, waxaana Guddoomiyaha loo doortay Axmed Xasan Diini oo wareegtadii sanadkii hore ka soo baxday Madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare Guddoomiye loogu magacaabay Guddoomiyaha Guddiga doorashada.
Doorasho maanta ka dhacday Hotel ku yaalla gudaha Air Porka ayaa Axmed Xasan Diini waxaa uu ku helay 10 cod, sidoo kale waxaa Kuxigeen loo doortay Xaliima Maxamed Cismaan oo heshay 11 cod, iyadoo aanay jirin cid la tartantay.
Amino Cabdullaahi Cusmaan, oo u tartantay xilka gudoomiyaha ayaa heshay 1 cod
Inta badan hoggaankii Guddiyada doorashada heer dowlad goboleed iyo heer Federaal ayaa dib loo doortay, inkastoo is bedel iyo kala shaandheyn lagu sameeyay xubnihii guddiga ee lagu muransanaa.
Hadana ma jiro wax is bedelay oo ku aadan hoggaanka guddiyadaas oo sidoodii u soo laabtay, waxaana durba soo baxaya hubaal la’aan ku aadan dhex dhexaadnimada guddoonka guddiyadan dib loo doortay, maadaama ay ku jireen liiskii raggii Midowha Musharaxiinta ay soo eedeeyeen, balse ka badbaaday kala shaandheyntii xubnaha qaar looga saaray guddigii hore ee lagu muransanaa.
Previous article5-ta Xiddig Ee Ugu Cad-Cad Ku Guulaysiga Ballon d’Or 2021 – banaadirsom
Next articleXOG XASAASI AH: Taliye Xijaar oo xilka laga qaadayo & Rooble oo ka hor yimid